दशैमा आर्शिवाद कस्तो दिने, कस्तो नदिने ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार दशैमा आर्शिवाद कस्तो दिने, कस्तो नदिने ?
दशैमा आर्शिवाद कस्तो दिने, कस्तो नदिने ?
२०७७, ९ कार्तिक आईतवार १५:३५
दशैमा दिइने आर्शिवादका बारेमा पनि सुधार र संशोधन गर्नु पर्ने सुझाव धार्मिक विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
उनीहरुले दशैमा आर्शिवाद प्रदान तथा ग्रहण महत्वपूर्ण पक्ष भएपनि कस्तो आर्शिवाद दिने वा कस्तो नदिने भन्ने बारेमा भने धेरैले ख्याल नगरेको उनीहरुको बुझाई छ ।
पहिला पहिला असल संस्कार र जिम्मेबारीबोध गराउने आर्शिवाद दिने गरेपनि पछिल्लो समयमा व्यक्तिगत लाभका विषयमा आर्शिवाद केन्द्रीत हुन थालेको आध्यात्मिक अभियान्ता चिन्तामणी योगीले टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, पैसा कमाए, पद कमाए, विदेश गए भनेर दिइने आर्शिवाद घटिया आर्शिवाद हो, त्यस्तो आर्शिवाद कसैले नदिनुहोला ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग उहाँले श्रद्धा गर्न, त्यागी बन्न, दानी माान्छे बन्न र मान्छे र माटोको सेवा गर्न प्रेरित गर्ने आर्शिवाद दिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । आर्शिवादले अहंकारी बन्न हैन विनयशिल बन्न सिकाउनु पर्ने र आपसी सम्वन्ध र संस्कार राम्रो बनाउन प्रेरणा दिनु पर्ने योगीको तर्क छ ।
उहाँले आफ्ना घरपरिवारसँग मात्रै नभई सवै वर्ग, समुदाय, धर्म, संस्कृतिका बडाहरुसँग आर्शिवाद लिने भएकाले यसलाई बडादशैँ भनिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
बडादशैलाई सम्वन्ध बढाउने, परिवार, टोल, समुदाय, नातेदार सवैलाई जोड्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । दशैमा ग्रहण गरिने आर्शिवाद र शक्तिपिठहरुमा गरिने पुजा आरधनाले प्रतिरोधात्मक क्षमता बृद्धि गर्ने बैज्ञानिक आधार रहेको दावी पनि उहाँले गर्नुभयो ।
आर्शिवाद लिँदा वा दिँदा, शक्तिपिठहरुमा आरधना गर्दा सामाजिक दुरी कायम गर्ने, मास्क लगाउनेलगायतका स्वास्थ्य सतर्कता र सुरक्षाका उपायहरु भने अबलम्बन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिने डरले शक्तिपिठहरु बन्द गरिएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँले कोरोना पनि एक प्रकारको सत्रु भएकाले त्यसलाई शक्तिपिठहरुमा अरुबेला भन्दा धेरै पुजा आजा हुनु पर्ने तर्क गर्नुभयो ।उहाँले बडादशै सत्रुमाथीको विजयको पर्वपनि भएकाले कोरोना रुपी सत्रुलाई जित्न दशैमा धेरै आर्शिवाद लिने र धेरै शक्तिपिठहरुको आरधना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । Source:nepalinetwork.com
Previous articleबालगृहका बालबालिकालाई अनुभव सुनाउँदै सपना
Next articleकोरोनाका कारण ९ दिनको अन्तरमा आमाछोरीको मृत्यु